जापानको पैसा लेनदेन हुने संस्कृति। किन बिबाहमा पैसा दिईन्छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > TRADITIONAL > जापानको पैसा लेनदेन हुने संस्कृति। के हो नोमिखाई? किन बिबाहमा पैसा दिईन्छ ?
यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर जापानमा टिप्स दिने वा लिने चलन छैन। तथापी यस्ता केहि चाड वाड छन् जहाँ पैसाको लेनदेन गरिन्छ। पैसा दिएर वा लीएर खुसि र आसिर्बाद साटा साट गरिन्छ। हामी यो लेखमा त्यस्ता केहि चलन र संस्कृतिको जानकारी हजुरहरुलाई गराउनेछु।
यी कुरा थाह पाउनले हजुरहरु नि जापानमा बसुन्जेल यहाँ को छाल चलनमा राम्रो संग घुलमेल हुन सक्नु हुनेछ। हजुर पनि यस्तो अवस्था आइपरेमा त्यहि अनुसार गर्न तयार हुनुहोस्।
१. बिबाह र मलामी
बिबाह र मलामी यस्ता केहि अवस्था हुन् जहाँ यदि हजुरलाई बोलाईएको छ भने हजुरले पैसा दिनु पर्ने हुन सक्छ। यी दुवै सेरेमोनीमा जापानीजहरु जापानी येन लिएर जाने गर्छन। उनीहरु पैसा एक विशेस प्रकारको खाममा राखेर दिन्छन। त्यो खामलाई गो-शुगी बुकुरो भनिन्छ। विवाहमा दिइने पैसालाई “गो शुगी” भनिन्छ। यो पैसा नव विवाहित दम्पतिको लागि शुभकामना जसरि दिईन्छ।
कोहि बित्दा, मलामी भएर जानु पर्दा दिईने पैसालाई “गोकोदेन” भनिन्छ। यो चाहि शोकाकुल परिवारलाई सहनाभुती देखाउन दिने गरिन्छ। पैसा कति दिनु पर्ने भन्ने कुरा हजुर र हजुरलाई बोलाउने मानिस संगको सम्बन्धले बताउछ। नजिकको सम्बन्ध भएको मानिसले बढी पैसा दिनु पर्दछ। यदि हजुरलाई क गर्ने भन्ने कुरा थाह छैन भने इभेन्ट हुनु अघिल्लो दिन नहिच्किचाई अरुलाई सोद्धा हुन्छ।
पैसा दिदा हालेर दिईने खाम कोम्बिनी वा सुपामा सजिलै पाइन्छ। बिबाहको खाम मा रातो र सेतो धागो जस्तो हुन्छ भने मलामीको चाहि कालो र सेतो हुन्छ। कोहि कोहि मानिसले गिफ्ट क्याटलग हेरेर गिफ्ट कार्ड दिने गर्छन। गिफ्टमा खाने कुरा, रक्सि वा किचेनको भाडाहरु हुन सक्छन। बिबाहित जोडीले धेरै अप्सनबाट आफुलाई सुहाउदो गिफ्ट रोज्न सक्छन।
२. मन्दिरमा दिईने पैसा
जापानी मन्दिरमा प्राथना गर्दा चढाउने पैसालाई ओसाइसेन (お賽銭）भनिन्छ। बिबाह वा मलामी जस्तो प्राथना गर्दा यति उति पैसा दिनु पर्छ भन्ने हुन्न। दानमा दिइने पैसा सिधै ओसाईसेन बाकसमा हालिन्छ। कति हाल्ने चाहि आफैमा भर पर्छ। यो रिति धेरै पुरानो हो। पहिले पहिले जापानीहरु देउतालाई आफ्नो पहिलो अन्न चढाउने गर्दथे। पछि यो चलन अन्न बाट पैसामा बदलिएको बताइन्छ।
जापानमा ५ एन चढाउदा भाग्य बन्छ भन्ने चलन छ। ५ एनलाई जापानी भाषामा “गो एन” लेखिन्छ। यसको खान्जी, गुड लकको खान्जी संग मिल्ने हुनाले त्यसो भनिएको बताईन्छ। मन्दिरमा धेरै दान दिने भन्दा पनि आफ्नो मन सफा र पवित्र भयो भने संसार राम्रो हुन्छ।
३. रक्सि पार्टी (नोमिखाई पार्टी)
जापानीहरु काम सकिएपछि आफ्नो कामको साथि संग नोमिखाई जना मन पराउछन। बिल तिर्दा, तिन तरिका हुन सक्छ। पहिलो हो “ओगोरि”। बोस वा अफिसको ठूलो पोजिसनको मान्छे संग नोमिखाई जादा उनीहरुले पुरै पार्टीको बिल तिर्न सक्छन। त्यसलाई जापानीमा ओगोरि भनिन्छ। अर्को हो, कसैले स्वखुसीले बिल तिर्नु। तेस्रो र सबैभन्दा सजिलो हो, पुरा बिल सबैले बराबरी गरेर बाढ्नु। यो सबै भन्दा ब्यबहारिक तरिका हो। तर बिल भाग लगाउदा हजुरले कति खानु वा पिउनु भयो भनेर हेरिन्न। सबैलाई बराबरी तिर्न लगाईन्छ।
आशा छ हजुरलाई जापानको पैसा लेनदेन संग सम्बन्धित केहि जानकारी पक्कै भयो होला। पैसाको संस्कृति हरेक देशमा हुन्छ र सबैलाई पैसाको कुरा अप्ठेरो लाग्छ। यो कुरा थाहपाई राख्नाले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुन्न।
By Yuki Sakuma
Go shugi bukuro
रान्दोसेरु: के हो त यो ब्याग ?